Lalana sy Tetezana ary Tohatra
2013-01-13 @ 22:38 in Ankapobeny
Efa ela aho no te-hanoratra ka ho fanombohana ny taona 2013 dia mba ho vaovao tsara no hisantatra azy! Nikaroka ihany aho fa jamba angamba fa ny zavatra nokarakarain'ny tena sy ny karazana fialamboly niarahana tamin'ny fianakaviana angamba no hoe nahafinaritra tamin'ny farany sy fanombohan'ny taona dia izay ihany. Sambany ihany koa no tsy mba nisy orana, araka ny fitadidiako, izany fetin'ny faran'ny taona teto Antananarivo izany hany ka betsaka, hono, ny olona no nandehandeha teny an'arabe ka toy ny andro atoandro ihany.
Izahay moa efa zatra loatra amin'ilay faritra lazaina ho mafanafana angaha ka tsy nanana eritreritra hoe handehandeha amin'ny alina izany. Izaho rahateo tsy hanaiky tsy haka sary, izany hoe hitondra fakantsary, raha amin'ny fotoana toy izany, nefa ny tahotra no ho bebe kokoa. Raha hitady na hiandry ilay vaovao tsara anefa toa tsy hahita mihitsy ka lasa sakana tsy amoahana ny vaovao izay efa maromaro sahady fa dia aleo manoratra avy hatrany aloha. Dia miarahaba ny rehetra izany nahatratra ity taona vaovao 2013 ity. Alefa hatrany ny firariantsoa na eo aza ny fanahiana sy ny karazana tsindrimandry-tsinapa tsy dia tsara loatra fa aleo aloha mba zavatra tsotsotra no hanombohana...
Lalana: Voambolana efa nanana ny lazany hatry ny elaela. Nanomboka tamin'ny hoe : "Amboary Ny Lalana". Niampita tamin'ny "Tohizo ny Lalantsika" ary niafara tamin'ny "Iny Lalana Iny" hatreto. Misy ny hadrohadro tamin'izany fotoana nanao hoe: "Ny lalana angaha azo hanina?" rehefa hita fa tontosa ilay fampanantenana fa na izany aza karazana lalan-dràn'ny tanàna sy ny firenena io ka tsy hitako izay hanamaivanana azy. Efa mandeha indray izao "tetikasa Lalankely" izao saingy efa misy miova anarana sy habe ilay izy angaha ka aleo tsy resahina loatra.
Dia ao anatin'ny tetezana indray ny Malagasy amin'izao fotoana izao. Tetezamita, hono, no anarany saingy ny hadrohadron-dRamalagasy tsy azo ahifika fa nivadika tsimoramora ho tetezamitatra ny anarany. Miitatra tahaka ny sima misoka manko ny fe-potoana iasan'ny mpitondra lazaina ho tetezamita ka tsy fantatra intsony izay hiafarany. Mety ho lasa Repoblika manokana mihitsy koa ilay tetezamita satria efa averimberina hatrany fa roa taona izao ny Repoblika fahaefatra.
Nefa mety ho ny vanim-potoana Tetezamita koa no fahaefatra eto Madagasikara raha itodihana ny tantara. Tetezamita voalohany ny 1972-1975 izay tetezamita tokony hifarana ny 1977 fa tapaka sy nohafainganina tamin'ny 1975. Tetezamita faharoa ny tamin'ny 1991-1992. Tetezamita fahatelo ny tamin'ny 1996 ary ny tetezamita fahaefatra ny nanomboka tamin'ny 2009 ary tsy fanta-piafarana ka mety haharitra folo taona na roapolo taona, eny mety hihoatra aza. Koa diso ve aho raha manoratra hoe Repoblika Tetezamita Fahaefatra isika izao?
Fa ny zava-baovaon'ny 2013 no lazaiko anareo. Nanambara ny filohan'ny FAT fa hanamboatra ny tohatoha-bato Antaninarenina sy Ambondrona. Nomarihany mazava fa ny Prezidansa fa tsy ny Kaominina no misahana izany fanamboarana na fandrakofana ny tohatoha-bato izany. Raha ny fisantaran'asa manko no jerena (jereo ato ny sary) dia tahaka ny tsy ho esorina ny vato efa eo fa tovonana vato hafa eo ambony fotsiny ilay tohatoha-bato.
Nihazakazahana ny naka sary satria mety tsy ho hita intsony ny endrik'ilay tohatoha-bato amin'izao fotoana ary mba ahafahana manao fampitaha amin'izay tena antony nilàna ny fanavaozana ireo tohatoha-bato tokoa. Tsy matihanina ny tena sady tsy sahy mizesta ho mpaka sary igagàn'ny olona sy mety hanaitra ny mpanendaka koa ialàna tsiny indrindra ny mety ho tsy fahafaham-po. Manoratra izany aho satria na izaho aza tena tsy afa-po mihitsy! Dia mirary soa e!
Hatreo ny sary tamin'ny tohatoha-baton'Antaninarenina natao fotsy sy maintsy satria efa ho taloha izany ny sary fa dia ho hitantsika indray ny mety ho endriny vaovao. Fa lasa ihany ny saina hoe nahazo aingam-panahy tamin'ny nandehanana tany Jerosalema ve ranamana ka maika ny hanavao ny tohatra. Nanonofy tam-patoriana tahaka an'i Isiraely ve ka nanapa-kevitra tampoka ny hanao tohatra hiakarana sy idinan'ny... olona? Sa te-haka tso-drano amin-dRanavalona Reniny hitondra maharitra ny firenena dia mba amboarina ny tohatra mitondra ny anarany? Mba misy sary miloko ihany fa eto angamba vao apetaka.
Hatreo ny sary nalaina teny amin'ny tohatoha-bato Antaninarenina fa hiakatra ny tohatoha-bato ampita avaratra kosa isika dia ny mankeny Ambondrona izany.
Ary dia aleo faranana amin'ny sary mainty sy fotsy ihany!
Jentilisa 14 janoary 2013